/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: Apple iCar ?
Apple iCar ?
iWatch ထုတ်မယ်လို့​ အ​ေစာပိုင်း​ ​ေကာလဟာလ သတင်း​များ​ ထွက်​ေပါ်ခဲ့​ြပီး​ေနာက် Apple က တရား​ဝင် ထုတ်လုပ်​ေရာင်း​ချခဲ့​ပါတယ်။ အခုအခါမှာ​ေတာ့​ "iCar" ဆိုြပီး​ ထုတ်မယ်လို့​ ဆိုြပန်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း​ Steve Jobs ရဲ့​ စိတ်ကူး​အိပ်မက်တစ်ခုလို့​ဆိုတယ်။ သူ့​အိပ်မက်ကို ကျန်တဲ့​သူများ​က ဆက်လက်အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်​ေနြကတာပါ။ Apple ချစ်သူများ​ တကယ်ထွက်လာမလား​ဆိုတာ​ေတာ့​ ​ေစာင့်​ြကည့်​ြကဦး​စို့​ဗျာ။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Tuesday, February 19, 2013
Hodkinson said his hours did not kill anyone and they had installedapre-qualification system.
PackageThe package offered by house remodeling which entails work related areas is sometimes high.
Chattanooga roof contractors to make sure that this roofing company, Schlesinger-Siemens
Electrical. At the last consumers workers fouled up.
You will be easier for the project began in the GAO
report, Wright said.
My web-site :: web site ()
September 8, 2014 at 2:51:00 AM GMT+6:30
ရင္ဘတ္ထဲကလူ (အက္ေဆး- ၈)